Ukuprinta -Shanghai Comi Aroma Co., Ltd.
Okokugqibela, isiqwenga sokugqibela sephazili esimbonakalo yakho eyahlukileyo yindlela uphawu lwakho lwentengiso kunye nemveliso eprintwe ngayo kwimpahla yakho. Apha, sinikezela ngoluhlu olupheleleyo lwezinto onokukhetha kuzo, kubandakanya ukuvavanywa kwesilika, ukushicilela nge-offset, i-HTL / ileyibheli yokuDlulisa ubushushu, ukunyathela okushushu, i-laser etching. Sikwabonelela ngeenkonzo zokwenza ngokwezifiso iibhokisi eziprintiweyo kwiimfuno zakho zokupakisha.
Ukuba uziva ukoyiswa kukhetho, iingcali zethu zinokukunceda ekukhokeleni. Qhagamshelana nathi
Ukuvavanywa kwesilika yinkqubo apho i-inki icinezelweyo kwiscreen esiphathwe ngokufotwa ngaphezulu. Umbala omnye usetyenziswa ngexesha, ngescreen esinye sombala omnye. Inani lemibala elifunekayo ukumisela ukuba zingaphi iipasile ezifunekayo kuprinta wesilika. Unokuziva ukuthungwa kwemizobo eprintiweyo kumphezulu ohlotshisiweyo.
Ukuprinta nge-Offset kusetyenziswa iipleyiti zokuprinta ukudlulisela inki kwizikhongozeli. Obu buchwephesha buchanekile ngakumbi kunoshicilelo lwesilika kwaye busebenza ngemibala emininzi (ukuya kuthi ga kwimibala esi-8) kunye nomsebenzi wobugcisa osisiqingatha. Le nkqubo ifumaneka kwimibhobho kuphela. Awuyi kuva ukuthungwa kwemizobo eprintiweyo kodwa kukho umgca omnye wombala ogqithisileyo kwityhubhu.